मोबाइलको क्यामेराले कपडाभित्रकै दृश्य खिचे के होला? - Halkara News
मोबाइलको क्यामेराले कपडाभित्रकै दृश्य खिचे के होला?
एजेन्सी ३० असार २०७७, मंगलवार १९:१९ 661 पटक हेरिएको
हामी कपडा किन लगाउँछौं? अन्य कारण अनेक होलान् तर शरीरका गोप्य अंग छोप्नु नै कपडा लगाउनुको मुख्य कारण हो। तर, मोबाइलले फोटो खिच्दा तपाईंले लगाएको कपडाभित्रकै दृश्य पनि खिचिदियो भने? हैट् ! हामी त्यस्तो कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं।
यदि त्यस्तो प्रविधि हाम्रो जीवन व्यवहारमा आइलाग्यो भने के होला?
यो समाचार झण्डै त्यस्तै खालको एक्सरे प्रविधिमा आधारित एउटा मोबाइल कम्पनीले निर्माण गरेको मोबाइलको क्यामेराका बारेमा रहेको छ।
स्मार्टफोन कम्पनी वन प्लसले हालै आफ्नो फ्लागसिप स्मार्टफोन वनप्लस ८ प्रो लञ्च गर्‍यो। उक्त फोनको क्यामराले पातलो प्लास्टिक तथा कपडाले छोपिएको चिजको समेत फोटो खिच्न सक्दथ्यो।
सोसल मिडियामा शेयर गरिएका केही तस्वीरहरुबाट प्रष्ट हुन्थ्यो कि वनप्लसको इन्फ्रारेड लेन्सले कतिपय ग्याजेट्सका खोलहरु भित्रको दृश्य समेत खिच्दथ्यो र तस्वीरमा ग्याजेटको ब्याट्री तथा तारहरुसमेत देखिन्थ्यो। त्यस्तै कालो टिसर्टभित्रको दृश्य समेत यो क्यामराले खिच्न सक्दथ्यो।
वनप्लसको पछाडि पट्टिको भागमा ४ वटा मुख्य क्यामराहरु थिए। जसमा एउटा फोटोक्रोम लेन्स थियो। प्रयोगकर्ताहरुको गुनासो आएसँगै कम्पनीले स्मार्टफोनको उक्त फोटोक्रोम क्यामरा सधैका लागि बन्द गरिदिएको छ। कम्पनीले एक आधिकारिक ब्लग मार्फत् यसको पुष्टि गरेको छ।
जिउमा लगाएको कपडाको भित्री दृश्य समेत खिच्नसक्ने भनिएको उक्त एक्सरे भिजन स्मार्टफोन क्यामरालाई लिएर प्रयोगकर्ताहरुले व्यापकरुपमा चिन्ता व्यक्त गरेसँगै उक्त क्यामरा फिचरमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो।
वनप्लसले नयाँ डिभाइसका लागि एक सफ्टवेयर अपडेट जारी गरेको छ। उक्त अपडेटसँगै फोनको क्यामराले कपडाभित्रको दृश्य खिच्न सक्ने छैन। उक्त अपडेट अगाडि नै धेरै प्रयोगकर्ताले सो क्यामराबाट तस्वीर खिचेर सोसल मिडियामा शेयर गरिसकेका थिए।